Kusetshenziswa i-API yeTechnorati ne-PHP | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 24, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: March 3, 2007 - Ikhishwe i-Technorati Rank WordPress Plugin.
QAPHELA: Kuyaphela ukuthi iTechnorati inomkhawulo wemibuzo yansuku zonke. Ngithole indlela enzima, bangivalela ngaphandle. Uma ufake iwijethi, uzobona ukuthi ithi Iphutha ngesixhumanisi esibuyela ekhasini leProjekthi ukuze ukwazi ukulanda nokusingatha ikhodi ngokwakho. Ngibuye ngabuyekeza ikhodi ukuze uma usufinyelele isabelo sansuku zonke se- API izingcingo, zizomane zishintshe zibe isixhumanisi esithi "Engeza Kwezintandokazi".
Ukuba ngumthengisi wedatha ngokuhweba, nginamaphutha amabili (kulungile… amaningi angaphezu kwamabili, kepha lokhu kuhlobene nalokhu okuthunyelwe). Ngisebenza kahle ngezinhloso zezinombolo futhi ngisebenza kahle ngihlela futhi ngiqondanisa kahle amaphrojekthi, abantu, isoftware, njll. Ngisho nezincwadi zami zihleliwe (ohlangothini lwesobunxele lwecala lencwadi yisoftware nentuthuko, phezulu ngakwesokunxele ibhizinisi, ezansi kwesokudla kuyinto inganekwane).
Iphutha lezinombolo lingigcina ngibheka iTechnorati, iGoogle Analytics, neGoogle Adsense usuku lonke, nsuku zonke. ITechorati ingelinye lalawo elithola intshisekelo yami ngoba inginikeza ukuthi ngubani oxhuma kimi. Ngiyathanda ukuvakashela lawo masayithi futhi ngibone ukuthi bathini noma ukuthi bakuthole kuwusizo ini. Ukuze ngibone ukuthi isikhundla sami sishintshile noma cha, ngidinga ukusesha kubhulogi yami.
Bengidinga okuthile okusheshayo ngakho-ke ngihlelele i-'wijethi 'encane kumaTechnorati API ukuthola isikhundla sami ngokushesha futhi kalula. Empeleni yilokho okukhombisa isikhundla phezulu kwalokhu okuthunyelwe. Uma ungathanda ukubona ukuthi kanjani, shaya my ikhasi lephrojekthi up.
Feb 24, 2007 ngo-2: 06 AM
ngabe lokhu kusho ukuthi ngiba ngowokuqala ukubonga 🙂 futhi ngikwazise ukuthi ngikuboleke impela lokhu 🙂
Feb 24, 2007 ngo-8: 53 AM
Boleka kude, Steven! Yilokho okushiwo yile bhulogi.
Feb 24, 2007 ngo-1: 25 PM
Ngenze ukuguqulwa okusebenzisa ilogo yeTechnorati encane. Isitayela kahle manje. Ngibuye ngabuyekeza ikhasi lekhodi.
Feb 24, 2007 ngo-1: 29 PM
ukuthinta okuhle 🙂
Nginakho ukukubonisa kuwijethi yami yombhalo weSayithi Rankings - ngesikweletu esifanele ngenxa yalokho 🙂
Feb 24, 2007 ngo-1: 38 PM
Wow, leso yisikweletu ESIKHULU! Ngiyabonga kakhulu. Ungazizwa uphoqelekile ukukugcina lapho. Nginokuphawula okuncane ku-HTML okukhomba ekhasini lephrojekthi.
Feb 24, 2007 ngo-2: 45 PM
Ngilungise usayizi wombhalo we-LOL ngakho-ke ubukeka ungconywana.
Feb 24, 2007 ngo-6: 43 PM
Ngivuselele iwijethi ngetiphu enhle enikeza imininingwane eyengeziwe mayelana nezinga lakho! Igama leBlog yakho (ngokusho kweTechnorati) kanye nezixhumanisi namabhulogi angenayo!
Feb 24, 2007 ngo-10: 22 PM
Yebo, bekushesha lokho! Njengamanje ngithola iphutha kuTechnorati:
Usebenzise isabelo sakho sansuku zonke semibuzo ye-Technorati API.
Ngalokho engqondweni, ngiguqule okuthunyelwe kwami ​​lapha ukuze abantu babambe ikhodi bebodwa kunokushaya isayithi lami. Uxolo ngalokho bantu! Bengingazi nokuthi kukhona 'isabelo sansuku zonke'.
Feb 24, 2007 ngo-10: 28 PM
kahle ukuthi ncela ngempela uDoug 🙂… oh kahle bekumnandi ngenkathi iqhubeka. Yize izimbotshana ziyokhombisa ukuthandwa okucacile - mhlawumbe iTechnorati izobe ibonile futhi isebenzise okufana nakho uqobo
Feb 24, 2007 ngo-10: 43 PM
Ngethemba kanjalo, nami. Ngifunde isayithi labo futhi angikwazi ukuthola ukuthi yisiphi 'isabelo sansuku zonke'. Kuyacasula kancane.
Ngiguqule ikhodi ukuze ngivele ngidlulise umlayezo wephutha njengoba kuphawulwe i-HTML ngakho-ke ayibonisi i- “0” eyayisebenzisa. Manje kuzokhombisa iwijethi kuphela uma kunempendulo enhle.
Ngicabanga ukuthi ukubheja okuhle kakhulu kungaba ukusingatha ikhasi lomthombo ngokwakho ungakwenza lokho. Ngizokugcina uthumele lapho ngithola ukuthi yini 'isabelo sansuku zonke'. Ngiyabonga, Steven!
Feb 26, 2007 ngo-12: 44 AM
Kulungile… okunye ukuthuthuka. Uma uzama ukubheka i-URL enewijethi engeyona eyami, izokutshela ukuthi kunephutha bese ikuletha ekhasini lephrojekthi. Lokhu kwenzelwa ukuthi ukwazi ukulanda ikhodi bese uyisingatha ngokwakho. Noma ngubani angabamba le khodi futhi ngaleyo ndlela ngeke ungene kwisabelo sansuku zonke se-API.
Ngibuye ngiyishintshe ukuze uma ufinyelela isabelo sansuku zonke, simane sishintshele kusixhumanisi esithi “Engeza kuzintandokazi”!
Feb 27, 2007 ngo-11: 44 AM
Ngicabanga ukuthi abafana bakaDapper bakwenza kanjani? Mhlawumbe babheka kanye ngosuku futhi balondoloze imiphumela.
Isikrini se-Dapper Scraping sanoma iyiphi iSayithi
Mar 3, 2007 ku-6: 43 PM
Kulungile bakithi! Ngikubhale kabusha ngokuphelele lokhu ku-plugin ye-WordPress futhi ine-caching. Woohooo!
I-Technorati Rank WordPress Plugin
Mar 10, 2007 ku-2: 56 PM
Ngithole i-addon yakho encane yeTechnorati, yize ngithole ukuthi iseva yami ibingenayo i-cURL ehlanganiswe lapho kufakwa i-PHP5.
Ngakho-ke ngizobona ukuthi ngingawenza yini lo usebenze: http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ osize ngakho kulabo abangasebenzisi i-PHP5 🙂
Mar 10, 2007 ku-5: 21 PM
Hawu, Tyler! Bengazi ukuthi i-cURL iyimfuneko kepha angibonanga ukuthi abanye abantu bebengeke bayithole kubo. Bengicabanga ukuthi lowo ngumtapo wezincwadi olayishwe ngokuzenzakalela ngokufakwa kwe-PHP. Ngiyacabanga nje - kepha ngibheja ukuthi nokusebenzisa kukaSamanthon i-cURL.
Sep 10, 2008 ku-3: 44 AM
Ngibonga kakhulu! Lokhu kungisizile ukukhipha imithwalo.
Manje ngidinga nje ukuyiguqula futhi kufanele iphelele
Jul 17, 2009 ku-4: 20 AM
Noma ngubani uthole umqondo wokuthi umkhawulo wangempela uyini? Ngisanda kuthola indlela enzima kakhulu yokuhlola uhlelo lokusebenza 🙁
Jul 17, 2009 ku-4: 24 AM
Oh ngithole nje ukuthi ngu-1000… hhawu, ngabe ngenze imibuzo eyi-1000 namhlanje?
Jul 17, 2009 ngo-12: 02 PM
guitarnoize - qiniseka ukubeka uhlobo oluthile lwendlela elula yokulondolozwa kwesikhashana